Ny karaoty mainty dia karazana lava fotsy izay fantatry ny olon-drehetra, tsy mitovy amin'ny lokon'ny ravina izy io (mena volomparasy mena), fa amin'ny loha lava kokoa. Matetika ny ravin'io kara io dia ampiasaina amin'ny fanorenana, satria izy ireo dia tena mahatalanjona noho ny loko tsy mahazatra. Fa tsy noho ny fijery hafakely ihany no tianay an'io legioma io, manana karazana ilaina mahasoa ny voanio mena.
Karazana voankazo mena
Misy karazana voankazo mahavelona ny voankazo maina miaraka amin'ny laoka fotsy . Izy io koa dia manana fibresy avo lenta izay manampy amin'ny fanadiovana ny vatana amin'ny toaka sy ny poizina, satria fibres-nify izay tsy afaka mandevona ny vatantsika. Ny iray amin'ireo fahasamihafan'ny lolo mena sy ny havany fotsy dia ny habetsahan'ny keratin. Kerotine dia varo-maizina hita amin'ny ankapobeny, ny fantsika ary ny hoditra. Io proteinina io no tompon'andraikitra amin'ny elasticité na ny fahalemena. Io fanafody io izao dia ampiasaina amin'ny fomba fitsaboana ny volo na ny hodi-potsy na vaky.
Ny singa iray hafa miavaka izay mamaritra ny tombotsoan'ny kodiarana mena dia ny anthocyanin. Misaotra ny anthocyanin fa manana loko tsy mahazatra toy izany ny ravina. Ankoatra izany, ny anthocyan dia miteraka fananana hafa manan-danja amin'ny lolo mena, toy ny fanamafisana ny fahaizan'ny vatana hanohitra ny taratra radiôtaika, noho izany, ny sakafo avy amin'io karba io dia voatsindry mihinana rehefa marary taratra sy manapoizina ny vatana amin'ny metaly mavesatra, vokatry ny taratra.
Cyanide, izay hita ao amin'ny ravin'io legioma io, dia ilaina amin'ny fisorohana ny aretina amin'ny vava, mifandray amin'ny fahabetsahan'ny kapilara. Ampiasaina ihany koa izy hampitsaharana ny fandehanana ra. Ny kôlitika mena dia atolotra amin'ny fitsaboana ny homertonie, ny fery sy ny tsinay ary ny tsinay, ny fanasitranana, ny fanasitranana ny ratra sy ny fako. Ny habetsahan'ireo karazana fitsaboana sy ny voka-dratsin'ny kôlôkôla mena dia mahatonga azy io ho ampahany manan-danja amin'ny sakafo amin'ny sakafo .
Ankehitriny dia fantatsika fa tena ilaina ny voanio mena, ilaina ny milaza ny fahavoazany. Io legioma io dia mifanohitra amin'ny olona manana olana amin'ny fiasan'ny tiroida, satria mampihena ny fihanaky ny yôdia izany. Lamina hafa dia mety miteraka fitomboan'ny fitomboan'ny gaza.
Ahoana ny fihinanana osy?
Sakafo - kalôria ao
Firy ny kaloria amin'ny dite maitso?
Cherry dia tsara sy ratsy
Bibikely bucks - tsara sy ratsy
10 vokatra tsara indrindra ho an'ny fahasalamana
Sakafo avy amin'ny mainty hoditra - tsara sy ratsy
Ahoana ny fihinanana rehefa manao fanatanjahan-tena?
Acacia tantely - toetra mahasoa sy fanoherana
Ny menaka misy menaka dia tsara sy ratsy
Svetlana Fus - fomba fitsaboana
Ahoana ny famongorana cellulite ao an-trano ary hadinoy izany mandrakizay?
Akanjo maivana - ny fiovaovana tena mahaliana indrindra amin'ny akanjo lava mahazatra
Jeans ho an'ny tsakoina
Yoghurt homemade ao amin'ny multivariate
Inona no homena lehilahy ao anaty fiara?
Sakafo glasy "Plombir" ao an-trano
Dautzen Crez - biography
Grenade-Dove Nature Reserve
19 fampanantenana nataonao talohan'ny nahatongavan'ny ray aman-dreny
Ny Supermodel Kara Delevin no ho kintana vaovao an'i Luke Besson?
Ny taombaovao vita amin'ny volon'ondry
Ny fe-potoana maha-bevohoka amin'ny datin'ny fahatsiarovana
Sandwich - sakafo mahasolo sandwich miaraka amin'ny fofona isan-karazany
Lily-Rose Depp dia ho lasa "endrika" an'ny ranomafana Chanel vaovao
Demodecose amin'ny alika
Toro-fitahirizana ho an'ny boaty
Ahoana no handoavana lanja amin'ny buckwheat amin'ny yogourt?
Ariel Winter mialoha sy aorian'ny fandidiana
Fandaharana TV ho an'ny efitra fandroana